Madaxweyne Waare Oo Mooshin Laga keenayo Ayaa Ka Socda Muqdisho -
HomeWararkaMadaxweyne Waare Oo Mooshin Laga keenayo Ayaa Ka Socda Muqdisho
Madaxweyne Waare Oo Mooshin Laga keenayo Ayaa Ka Socda Muqdisho
September 13, 2018 F.G Wararka 0
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed, tan iyo markii uu ka soo laabtay magaalada Kismaayo, halkaasoo uu kaga qeyb galay shirka Golaha Islaashiga dowlad goboleedyada.
Inta badan Xildhibaanada Hirshabeelle ee ku sugan Muqdisho ayaa saacadihii u dambeeyay waday kulamo Hoose oo abaabulkiisa yahay mooshin la qorsheynayo in maalmaha soo socda laga keeno Madaxweyne Waare.
Xildhibaanada Hirshabeelle ayaa la sheegayaa inay diyaarinayaan mooshinka kalsooni kala noqosho ah, ka hor inta uusan furmin kalfadhiga Baarlamaanka oo fasax ku maqan.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Xildhibaanada Hirshabeelle oo shirar qarsoodi ku leh Muqdisho ayaa sheegaya in si hoose u socdo saxiixa mooshinka laga diyaarinayo Madaxweyne Waare.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa ugu baaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka inuu si degdeg ah ku yimaado, maadaama kalfadhiga Baarlamaanka uu fasax ku maqan yahay oo aan xirneyn.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa ugu baaqay Madaxweynaha inuu horyimaado Baarlamaanka, si su’aalo loo weydiiyo.
Madaxweynaha, Madaxweyne kuxigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay dib ugu laabtaan magaalada Jowhar.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa siyaasad ahaan u janjeera dowladda Federaalka, waxaana wararku sheegayaan in aanu la dhacsaneyn tallaabada Madaxweyne Waare uga horyimid Dowladda Dhexe, gaar ahaan go’aankii uu qeybta ka ahaa ee maamul goboleedyada wada shaqeyntii dowladda Federaalka ku hakiyeen.
Mooshin laga keeno Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ku dhaqan geli kara inay ugu horeyn soo jeediyeen 33 Xildhibaan, waxaana uu xilkiisa ku weyn karaa saddex meel labo meel oo ah tiro dhan 67 Xildhibaan inay Haa ugu codeeyaan.